Sawirro-muuqaal: Madaxweyne Deni oo tababar usoo xiray dufcadii labaad ee ciidamada Booliska Puntland ee ka qalinjebisay dugsiga Tababarka ee Xorgoble | Puntlandes.com
Sawirro-muuqaal: Madaxweyne Deni oo tababar usoo xiray dufcadii labaad ee ciidamada Booliska Puntland ee ka qalinjebisay dugsiga Tababarka ee Xorgoble
17 Jan 2021 (Puntlandes) Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, oo maanta safar shaqo ku yimi Qardho ayaa tababar usoo xiray dufacadii labaad ee ciidamada Booliska Puntland ee ka qalinjebisay dugsiga Tababarka ee Xorgoble.
Hadaljeedintiisa Madaxweynuhu wuxuu kusoo qaatay dhacdooyinka amniga lidiga ku ah iyo deganaanshaha ee ay geystaan siyaasiyiin dano kale leh, isago xasuusiyey in nidaamka Xisbiyada badan loo hirgeliyay in Siyaasiyinta kii dood qaba uu aragtidiisa ku gudbiyo.
” Waad ogtihiin Nidaamka Xisbiyada waa la furay, ninkii siyaasiyan dood qaba, waxaa loo furay Membaro ay ka hadlaan, 10 urur siyaasaded baa jira, qofkii aragti siyaasadeed qaba xor buu u yahay, laakiin waxaan marna la aqbali karin nin dhahaya waxbaan ka mudaharaadaya oo laamiyada gubaya oo baabi’inaya oo taayiro qarxinaya, oo dano kale leh, wax la aqbali karo maaha. Ciidanka Booliiska waxaa larabaa dadkaasi inay gacan ku dhigaan oo Cadaaladda horgeeyaan” Ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni.
Madaxweynaha ayaa u digey dadka caadeystay iyagoo fulinaya dano siyaasiyiin meelo kale jooga inay kiciyaan bulshada iyagoo barasha bulshada u adeegsanaya si khaldan.
Munaasabadda tababarka loogu soo xiray dufcadii labaad ee Ciidamada Booliska Puntland ee ka qalinjebiyey Dugsiga tababarka ee Xergoble, waxaa ka qeybgalay Guddiga dib-u-habeynta Ciidamada, Taliyaha Ciidamada Daraawiishta Puntland, Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland, Masuuliyiin hore usoo qabtay xilka Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya, xubno ka mid ah goleyaasha Dowladda Puntland, Maamulka Gobolka Karkaar, kan degmada Qardho iyo marti sharaf kale.